Madrona Getaway - I-Airbnb
Nanoose Bay, British Columbia, i-Canada
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Brian
(**Ngenxa ye-COVID-19 sicela uqiniseke ukuthi inhlanzeko yinto eza kuqala kithi. Siyakwamukela ukuthi uhlale lapha ngalesi sikhathi, nokwazi ukuthi sithatha zonke izinyathelo zokuphepha ukuze siqinisekise ukuthi iphephile kuzo zonke izihambeli zethu** ))
Indawo yethu iyindawo yesizini yonke enikeza okuthile kwawo wonke umuntu. Nethezeka, funda, ibhayisikili, gijima, bhala, bhukuda (maphakathi nentwasahlobo/ehlobo) bese uxhuma kabusha..noma yini oyijabulelayo.
Okubalulekile kimina noJess ukuthi unethezekile ngokuhlala kwakho, futhi sizozama ukukwenza kube okungcono kakhulu!
Indawo entsha elungiswe ngokugqamile, enohambo lwemizuzu emibili kuphela ukuya olwandle ku-Arbutus Dr enhle, e-Madrona, eNanoose Bay BC.
I-Suite yethu iyigumbi lokulala eli-1, Igumbi lokugeza eli-1, Igumbi lokuhlala eligcwele. Ikhishi elisebenza ngokugcwele, i-TV, i-WIFI, ivulandi lakho elimboziwe eline-BBQ, nokunye okuningi ongakuhlola nokubona isayithi ngomzila wolwandle khona lapho. Ngena ezindlini ezinhle kanye nokwakheka kwezwe e-Madrona njengoba ujabulela ukuhambahamba uye endaweni yolwandle lapho ungabona khona iziqhingi nezilwane zasendle zasolwandle. Uma uyi-Scuba Diver Madrona iphuzu linikeza ukutshuza odongeni okuningana okuhlukene, ukungena okulula, ukuphahlazeka komkhumbi, futhi ngokuvamile kuyikhaya lama-wolf eels nama-octos. Ukubuka kulolu hlangothi lwe-Georgia Straight muhle kubathwebuli bezithombe abangaphansi kwamanzi, futhi bangase babe nenhlanhla ethe xaxa ngokuthwebula izithombe ezinhle zalezi zilwane ezihlaba umxhwele. Ibhishi elihle laseRathtrevor kanye neParksville kukude ngemoto imizuzu. I-Nanoose iphinde inikeze nemizila yemvelo emangalisayo efana ne-Top bridge river yokubhukuda noma ukuhamba ngezinyawo kanye ne-Notch Hill ukuze uthole ukubukwa okumangalisayo! Uma uthanda igalofu, inkundla yegalofu i-Fairwinds isezingeni lomhlaba futhi ivulwa unyaka wonke. Jabulela ukuhambahamba edolobheni lase-Parksville lapho ungathola khona ukuzithokozisa okumnandi kokudla futhi uhlole izitolo ezihlukile. I-yoga, indawo yokuzivocavoca, nebhodi lokugwedla/i-kayak eqashiswayo iyatholakala nase-Parksville. Ezinye izinsiza eziseduze zifaka, i-Englishman river falls, nedolobha eliyingqayizivele lase-Coombs. Sibheke ngabomvu ukuhlala kwakho nathi!
Eduze neParksville, ulwandle, nezindlela ezinhle zemvelo.
Welcome to the Wood Residence! (Brian & Jess)
I am a Community Health worker at Island Health and Jess is a Hairstylist, and has her at home business as a Holistic Nutritionist! Our focus is to give people a great and comfortable experience in our home, and enjoy their stay to the fullest!
I am a Community Health worker at Island Health and Jess is a Hairstylist, and has her at home business as a Holistic Nutriti…
Hlola ezinye izinketho ezise- Nanoose Bay namaphethelo